Great Firewall ဘာလဲ ? ဘယ်လဲ ? — Anycall Mobile
By RKhar M Thant February 19, 20214Mins Read
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော် အခုတလောနာမည်ကြီးနေတဲ့ Great Firewall အကြောင်းကို နည်းနည်းလောက် ပြောပြချင်ပါတယ်။ Great Firewall လို့ပြောရင် အရင်ဆုံးပြေးမြင်ကြမှာက အိမ်နီးချင်း ပေါက်ဖော်ကြီးကိုပါ။ တကယ်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ Internet ပေါ်မှာ ဟိုပိတ် ဒီပိတ် ပိတ်ပင်မှုအများဆုံးက တရုတ်ကြီးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တခြား UAE တို့ Vietnam တို့လို နိုင်ငံတွေမှာလည်း Great Firewall တွေသုံးကြပါတယ်။ အိုကေ ဒါကတော့ ဗဟုသုတအတွက်ပါ။ ကဲ ကျွန်တော်တို့ Main Topic ဖြစ်တဲ့ Great Firewall အကြောင်းကို ဆက်လိုက်ရအောင် !
Firewall Logo – Internet
Great Firewall အကြောင်းကို မပြောခင် အရင်ဆုံး Firewall ဆိုတာဘာလဲ ? ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ ? ဆိုတာကို နည်းနည်းလောက် ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Great Firewall ဆိုတာ Firewall အကြီးစားမို့လို့ Firewall အကြောင်းကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင် Great Firewall ကို မှန်းဆကြည့်ဖို့ ပိုလွယ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Firewall ဆိုတာ ဘာလဲ ? ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အရင်ဆုံး ရှင်းပြပါရစေ။
Firewall ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က တိုက်ရိုက်ပြန်မယ်ဆိုရင် မီးနံရံပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ကားတွေမှာ Firewall ပါပါတယ်။ အင်ဂျင်ခန်းက အပူတွေကို Passenger တွေဘက် မရောက်စေဖို့ ကာပေးထားတဲ့ သံပြားတစ်ချပ်ပါ။ အခု Firewall ဆိုတာလည်း အဓိကအားဖြင့် အဲ့ဒီလို အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်က မလုံခြုံတဲ့ internet packets တွေ၊ Hacker တွေဆီက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ Connection တွေကို နံရံတစ်ခုသဖွယ် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
Car Firewall – CertBros(Youtube)
Firewall မှာ Software နဲ့ Hardware ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Software Firewall ဆိုတာက တွေ့ရလွယ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ Windows Computer တွေမှာ Windows Firewall ပါပါတယ်။ ခုနကလိုပဲ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ connections တွေကို ကာကွယ်ပေးတာပါ။ ထို့အတူ တချို့ Antivirus Software တွေမှာလည်း Firewall တွေပါပါတယ်။ ကိုယ့် Computer ကို Malicious Infections တွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတာမျိုးပေါ့။
Windows Firewall Icon – Internet
Hardware Firewall တွေကတော့ End User တွေအနေနဲ့ သိပ်ရင်းနှီးမယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ သူတို့ကို Server တွေ၊ Data Center တွေမှာ အများဆုံးသုံးကြပါတယ်။ သူကတော့ Network Switch လိုပုံစံမျိုးပါ။ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ ခုနကလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ အမြဲတမ်း လုံခြုံမနေပါဘူး။ တွေ့သမျှ Website တွေရာက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ Website တွေဝင်မိသွားတယ်ဆိုရင် Malicious Internet Packets တွေပြန်ဝင်လာပြီး ကျွန်တော်တို့ Computer တွေကို ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Malicious Packets တွေကို စစ်ထုတ်ပေးဖို့ Firewall တွေကို သုံးကြတာပါ။
Hardware Firewall Device – Internet
နောက်ထပ် Firewall တွေရဲ့ အားသာချက်က ကိုယ်ဝင်စေချင်တဲ့ Connections(Request) တွေကို ခွင့်ပြုပေးပြီး မဝင်စေချင်တာတွေကို ကာထုတ်ပစ်ဖို့ ကြိုပြီး စီစဉ်ထားလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ အလုပ်ရုံးထဲကို ရှေ့ကလုံခြုံရေးက ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူတွေကို ဝင်ခွင့်မပေးတာမျိုးပေါ့။ အဲ့ဒီလို စီစစ်ပြီး ကာထားလို့ရပါတယ်။
ပိုမြင်သာမယ့်ဥပမာအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ Browser တွေအလုပ်လုပ်ပုံကို နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Chrome Browser ကနေ www.facebook.com လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့စက်ကနေ Internet Packects လေးတွေကို “Request” အဖြစ် Facebook Server ဆီသို့ ပို့လွှတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ Facebook ဆီကိုရောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဆီကို Internet Packets လေးတွေပြန်ပို့ပြီး “Response” လုပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Response လေးတွေက ကျွန်တော်တို့ဆီကိုပြန်ရောက်ပြီး Facebook Website ကြီး Screen ပေါ်မှာ ပေါ်လာပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ Firewall ကနေပြီး Facebook.com ရဲ့ Response တွေကို ဝင်မလာနိုင်အောင် တားဆီးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Facebook Website ပေါ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘဲ Browser က Error Page ပဲပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါက Firewall က ကာပစ်လိုက်လို့ပါ။ အဲ့အချိန်မှာ တခြားပိတ်မထားတဲ့ Website တွေကတော့ ပုံမှန်အတိုင်း Request တွေ Response တွေရနေတာမို့လို့ အဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရနေပါလိမ့်မယ်။
How doesaFirewall works – RealLifeLore2
အိုကေ ဒါကတော့ Firewall ရဲ့အခြေခံသဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တချို့က မေးကောင်းမေးနိုင်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့က Firewall တွေဘာတွေ ခံပြီး ပိတ်မထားပဲနဲ့ကို ဘာလို့ Facebook သုံးလို့မရတာလဲ ပေါ့။ တကယ်တမ်းက ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေ Computer တွေဆီက ထွက်သွားတဲ့ Internet Request တွေက ရန်ကုန်ရဲ့ နေရာမှထွက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေရာကနေ Firewall ခံပြီး ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တနိုင်ငံလုံးကို သက်ရောက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ဘာမှမလုပ်ရပါဘဲ Facebook သုံးလို့မရဖြစ်နေတာပါ။ (VPN ကျော်သုံးရင်တော့ ရတယ်ပေါ့နော်)
What isaGreat Firewall ?
အခု Great Firewall အကြောင်း ပြောပြပါ့မယ်။ Great Firewall ဆိုတော့ မြန်မာလိုတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင် မဟာ မီးတံတိုင်းကြီးပေါ့။ နောက်တာပါ။ ခုနက Firewall တွေက ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးဆိုရင် ဒီ Great Firewall ကြီးက လောကကြီးအကြောင်း နောကြေနေတဲ့ 30 ကျော် 40 အရွယ်ပေါ့။ သူက ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲပြောရရင် နည်းနည်းတော့ ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ သူက ခုနကလို Request/ Response တွေကို ပိတ်နိုင်ရုံတင်မကဘဲ ပို့တဲ့ Device ကိုပါလိုက်ပြီး ခြေရာခံတာတို့၊ IP ကိုမှတ်ထားပြီး Browsing Behavior ကို စောင့်ကြည့်တာတို့တွေအထိ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တရုတ်မှာဆိုလည်း အဲ့ဒီအတွက်ကိုပဲ ဝန်ထမ်းပေါင်း တစ်သန်းလောက်ထားပြီး စောင့်ကြည့်ခိုင်းတယ်လို့ ကြားပါတယ်။ အဲ့လောက်ထိကို ကြမ်းတာပါ။
Great Firewall ဆိုတာကို မျက်လုံးထဲမြင်အောင် ပြောရမယ်ဆိုရင် တရုတ်နိုင်ငံက မဟာတံတိုင်းကြီးက တစ်နိုင်ငံလုံးကို ပတ်ပြီးကာထားတယ်လို့ မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ။ သူတို့ခွင့်ပြုထားတဲ့သူတွေကိုပဲ အဝင်အထွက်လုပ်လိုင်းမယ်။ ခိုးထွက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေကို System ကြီးက သတိထားမိမယ်။ သူဘာတွေလုပ်လဲ လိုက်စောင့်ကြည့်မယ်။ ဆွဲစိချင်ရင် ဆွဲစိပစ်လိုက်မယ်ပေါ့။ အဲ့ဒီလိုမျိုးပါပဲ။
ဒီ Great Firewall ကို ကျော်ခွဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား ? လို့မေးရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး။ VPN ကောင်းကောင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Connection ကို လုံလုံခြုံခြုံကာကွယ်ပြီး ကျော်လို့ ခွလို့ ရပါတယ်။ တရုတ်မှာလည်း Facebook, Google ကို VPN နဲ့ကျော်သုံးကြပါတယ်။
Can the government intercept between web server & us ?
နောက်ပြီး အခုတလောပိုင်း ကျွန်တော်တို့တွေ စိုးရိမ်နေကြတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကိုယ်ပို့တဲ့ Message တွေ၊ ကိုယ့်ဆီက Password စတဲ့ Information တွေကို ကြားထဲကနေ ထောက်လှမ်းခံရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စပါ။ အဲ့ဒါက သာမန်တွေးမယ်ဆိုရင်တော့ မဖြစ်နိုင်သယောင်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်တကယ် နည်းပညာလောကမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ Global Network နဲ့ ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာ Reverse Proxy တခုခံပြီး data တွေကို ကြားဖြတ်ယူလို့ရပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါကို ကာကွယ်ဖို့က ကျွန်တော်တို့ VPN သုံးရင်ရပါတယ်။
VPN ဆိုတဲ့အနေအထားမှာလည်း ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ VPN တွေကိုသုံးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Recommend ပေးချင်တာကတော့ Nord VPN (Paid), IPVanish (Paid) တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝယုံကြည်ရပါတယ်။ ဝယ်သုံးတာက အကောင်းဆုံးဆိုပေမယ့် Free သုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း 1.1.1.1 VPN (Free), Orbot VPN (Free) တွေကို စမ်းသုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ VPN ရဲ့သဘောက ကျွန်တော်တို့နဲ့ Web Server ကြားက ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကို Encrypt လုပ်ပြီး ကာကွယ်ပေးလို့ ပိုပြီး လုံခြုံစေတဲ့သဘောပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကြားထဲကနေပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Data တွေကို ဝင်ယူဖို့ မလွယ်တော့ဘူးပေါ့။
VPNs that we recommend – Anycall Mobile
ဆိုတော့ ဒီလောက်ဆိုရင် မိတ်ဆွေတို့ စိုးရိမ်နေတဲ့ Great Firewall အကြောင်းကို သေသေချာချာ နားလည်သွားလောက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီထဲက Technical Terms တွေကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ပြီး နားလည်အောင် ရှင်းပြထားတာမို့လို့ တချို့နေရာတွေမှာ လိုအပ်တာတွေ ရှိခဲ့နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဖြည့်စွက်ပြီးဆွေးနွေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေရှိရင် (ဒါမှမဟုတ်) မေးချင်တဲ့မေးခွန်တွေရှိခဲ့ရင် အောက်က Comments Box မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် Comments ပေးသွားခဲ့လို့ရပါတယ်။ အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့ တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် Article တစ်ခုမှာ ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့။ အားလုံးပဲ Stay Strong ပါ။ Stay Safe ပါ။
ChinaFirewallGreat FirewallHow does it work ?